Saturday October 06, 2018 - 19:56:59 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Sawir Cusub oo Sheekh Cali dheere laga qaadat 6 October 2018
Sheekh Cali Maxmuud Raage Sheekh Cali dheere, Afhayeenka Xarakada Al-Shabaab oo ka hadlayay munaasabad lacago sako ah lagu gudoonsiinayay boqollaal ruux oo reer Muqdisho ah ayaa ugu baaqay dalladaha waxbarashada iyo goobaha waxbarashada iney iska ilaaliyaan iney xiriir la sameeyaan dowladda Federaalka.
Afhayeenka Xarakada Al-Shabaab Sheekh Cali dheere wuxuu ka hadlay ahmiyadda ay leedahay waxbarashada iyo duulaanka ay Shisheeyuhu ku qaadeen jaanibkaas, wuxuuna sheegay in iskuullada iyo Jaamacadaha ay yihiin goobo muhiim ah oo wax lagu baro ubadka, ayna waajib tahay in laga ilaaliyo wax weliba oo wasakheyn kara Caqiidada umadda muslimka ah.
Manaahijta Khaldan ee Waxbarashada
Hadalka kasoo baxay Xarakada Al-Shabaab ayaa kusoo aadaya xilli dalladaha waxabarasho ee magaalada Muqdisho ay ardeyda u dhigaan manhaj ka hor imaanaya diinta Islaamka oo ay soo diyaarisay hay’adda UNESCO ee Qaramada Midoobay.
Afhayeenka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere ayaa sidoo kale digniin culus u jeediyay xarumaha caanka ku ah fisqiga siiba kuwa ku teedsan xeebta Liido isagoo sheegay inaan loo dul qaadan karin fasaadka kusoo kordhay magaalada Muqdisho.
Culimada, wax garadka iyo cid kasta oo kalain ka geysan karta la dagaalanka fisqiga ayuu kula taliyay ineysan ka aamusin xumaha bannaanka yaalla ee ummada dhaqankeeda lagu doorinayo, wuxuuna sheegay haddii aanan xumahan laga hor tagin inuu noqon doono mid ummada oo dhan camima ama saameyn ku yeesha.